प्रदेश सरकारले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै युवामुखी कृषि योजनाहरु तयार पारेको छ,रोजगारी गुमाएका युवाहरु कृषि कर्ममा लाग्नुहोस्: कृषि मन्त्री साह
नेपाल संघीय संरचनामा गएको पाँच वर्ष भैसक्यो । प्रदेश सरकारको गठन भएको साढे दुई वर्ष भयो । परिवर्तित नेपालमा कृषकहरुको अवस्था कस्तो छ त ? अन्न भण्डारको रुपमा रहँदै आएको प्रदेश नं. २ मा कृषिको अवस्था कस्तो छ ? प्रदेश २ को कृषि मन्त्रालयले कस्ता किसिमका योजनाहरु अहिले सम्म संचालन गरेका छन् त ?र कोरोना महामारीको समयमा कृषि मन्त्रालयको भूमिका कस्तो रहँदै आएको छ भन्ने जस्ता विषय वस्तुमा प्रदेश नं. २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहसंग शिरीष न्युजका प्रदेश-२ संयोजक रणधीर चौधरी लामो कुरा गरेका थिए । प्रस्तुत छ मन्त्री साह संग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
संघीय संरचना बमोजिम तपाईँले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेको झण्डै तीन वर्ष हुन लागेको छ । आफ्नो कामकाजबाट कतिको संतुष्ट हुनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त म आफुलाई मन्त्री भन्दा पनि आम कृषकका साथीको रुपमा आफुलाई परिचय दिन रुचाउँछु । त्यहीँ अनुरुप मैले कृषक का लागि केही गर्नुपर्छ भने भावनालाई आत्मशात गर्दै आएको छु । यद्धपी राजनीतिक हिसाबले मैले सम्हालिरहेको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रि कै हो । अब रह्यो कुरा संतुष्टी वा असंतुष्टीको । यसलाई मैले सापेक्षिक ढंगले हेरेको छु । र यसमाके भन्न चाहन्छु भने कामको मामलामा हामी जहिले पनि असंतुष्ट हुनु आवश्यक छ । असंतुष्टीले काम गर्ने इच्छा शक्ति लाई जिवीत राख्छ ।
वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने आमजनतको अपेक्षानुसार हामीले ‘डेलेवरी’ दिन सकेका छैनौँ । त्यसका कारणहरु छन् । पहिलो, संघीय संरचनामा देश गएपश्चात संघियताको अभ्यासको थालनी मात्र भएको छ । अहिले हामीले संघियतालाई संरचनागत हिसाबले स्थायित्व दिने बेला पनि हो । संघीयता अभ्यासमा आएदेखि प्रदेश नं. २ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मा मैले पाएँ । मन्त्रालयको जिम्मा पाए पश्चात मैले मन्त्रालयमा खुट्टा टेक्दा एउटा कार्यालय प्रमूख जस्तो अनुभूती भएको थियो । त्यसपश्चात जिलाका संरचानाहरु आयो । फेरी निर्देशनालयहरु बनायौ । ६ वटा जिल्लामा मात्र कृषि ज्ञानकेन्द्र थियो । अहिले हामीले ८ वटै जिल्लामा बनाउन सफल भएका छौ । ल्याब बनायौँ । बिउबिजन प्रयोगशाला बनायौ । माटो परिक्षण प्रयोगशाला बनायौ । बाली संरक्षण प्रयोगशाला बनायौ । यसरी हामीले संरचनागत बिकाश गरेका छौँ । ऐन कानुनको अभाव बारे सबैलाई थाहा नै छ । तसर्थ आवश्यक एन कानून निर्माणमा समेत हामीले आफुलाई केन्द्रित गर्यौ । सहकारी ऐन र दुध विकाश बोर्ड निर्माणको कार्यलाई हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याउन सफल भएका छौँ ।
७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटाले दुध विकाश बोर्ड निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश नं. २ नै किन पछाडी परेको छ त ?
बोर्ड गठन गर्नु कुनै ठूलो उपल्बधी हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्धपी यो बोर्ड को औचित्य माथि मैले प्रश्न उठाए भनी अर्थ नलागोस । यसको औचित्यता अधिक छ । हामीले काम गर्ने क्रममा कुन कामलाई ग्राहिता दिने हो त्यसमा भर पर्छ । हेर्नुस, दुध विकाश बोर्ड भन्दा पनि हामीले दुध उत्पादनलाई प्रमुखता दियौँ । यस वर्ष हामीले “हुलाकी दूध मिसन” कार्यक्रम तयार पारेका छौँ । अब यो मिसनलाई हामीले केही अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई ग्राहेता दिएर अगाडी बढ्नेमा आफुलाई केन्द्रित गर्दै अघी बढी रहेका छौँ । अब हाउस खुल्ने बितिकै दूध विकाश बोर्ड सदन बाटै पास हुन्छ र हामीले बोर्डको लागि आवश्यक पर्ने बजेट समेत छुट्याइ सकेका छौ ।
गत वर्ष चैत्र महिना मा कोरोनाले आफ्नो कहर विश्वभरी प्रवाह गर्यो । हठातरुपमा विश्व प्रभावित हुनगयो । तपाईँहरुले पनिगत वर्ष तर्जुमा गर्नुभएका योजनाहरु संचालन गर्न सक्नुभएन । यद्धपी तपाईँको सक्रियता कोरोनाकालमा पनि देखिएको थियो । दौडधुप ब्यापक गर्र्नुभयो । तपाईँले देखाउनुभएको सक्रियताले कृषकमुखी नतिजा ल्याउन सक्यो त ?
यो कोरोना भाइरसले निम्त्याएको त्रासदीले विश्वमा तबाही मच्चाएको बिदितै छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा यसले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो नाकारात्मक प्रभाव पारिनै रहेको अवस्था छ । अहिले नेपालमा प्रदेशगत हिसाबले हेर्ने हो भने प्रदेश नं. २ मा संक्रमितको संख्या अधिक छ र बढ्ने क्रम रोकिएको छैन् । मानव स्वास्थ्य पश्चात यसले सबैभन्दा अधिक नाकारात्मक असर पारेको क्षेत्र हो, कृषि । नेपालमा प्रदेश नं. २ कृषि सामर्थ्य र सम्भावनाको दृष्टिकोणले अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय जसरी यसले कृषकलाई बेदना दिने काम गर्यो यस्तो अवस्थामा म कृषि मन्त्रिको हैसियतले घर बस्ने हिम्मत समेत गर्न सकिन । प्रदेश नंं. २ का कृषकको बेदनामा थोरै भएपनि मलहम लगाउन सक्नुपर्छ भने भावनाले मलाई सामान्य अवस्थाभन्दा अधिक सक्रिय बन्न उद्धेल्लित गर्यो, र भए पनि । त्यसक्रम मा स्याना किसानहरुको उत्पादन कुहिने अवस्थामा पुगेको थियो । उपभोक्तासम्म उक्त उत्पादन पुग्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको थियो । जनजीवन नै ठप्प रहेको थियो । हो, अनि हामीले आठ वटै जिल्लाका किसानहरुको उत्पादनलाई कसरी बजार सम्म पुर्याउन सकिन्छ भनी सोँचका साथ एउटा ‘मेकानिजम’ बनायौ । जनकपुरमा त हामीले तरकारी बिक्रका लागि स्टल नै राख्न लगायौ । त्यसैगरि दूधबिक्रिका लागि ढल्केबरको डिडीसी संग सहकार्य गर्यौ । कृषकको उत्पादन लाई उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउनु समयको परम माँग थियो र हामीले सक्दो सफलता पनि पायौँ उक्त कार्यमा । त्यसैगरि लकडाउन अवधी बढ्दै गर्दा हामीलाई त्यसता किसानहरुको अधिक चिन्ता लाग्न थाल्यो जो की कृषि प्रयोजनार्थ बैंकहरुबाट कर्जा लिनुभएको थियो । खासगरि स्याना किसानहरु ब्याज तिर्न नसकेर आर्थिकभारको भूमरीमा भास्न बाध्य थिए । त्यस्तो अवस्थामा हामीले चैत्र देखि असाढ महिना सम्मको ब्याज रकम सिधै किसानको खातामा डिपोजीट गर्न लगायौ । यसमा हरेक जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रका साथीहरुले पनि कडा मिहनेत गर्नुभएको थियो । झण्डै ४८ हजार किसानलाई चार महिनाको ब्याज रकम किसानको खातामा पठाउनु नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक भयो । उक्त ब्याज रकमको लागि मैले कृषि मन्त्रालयको बिभिन्न शिर्षकमा रहेको बजेटलाई रकमान्तरन गरी ३० करोड र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट ६ करोड गरि जम्मा ३६ कारोड रकम पिडीत कृषकलाई राहत प्रदान मा लगायौ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी ब्याप्त छ । कृषकहरुले अर्बौ रकम कर्जा लिएका रहेछन् । तर लगानीको अनुपातमा आउटकम नदेखिनु कतै अनुसन्धान मा कमी त रहेको छैन् ? प्रदेश सरकार कृषिमा अनुसन्धानको पाटो प्रति कतिको गम्भिर रहेको छ ?
वास्तवमा यो एकदमै गम्भिर विषय हो । यसलाई प्रदेश सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । अझ बढी कृषि मन्त्रालयको लागि यो पाटो अति नै महत्वपूर्ण रहेको छ । लगानी अनुसारको नतिजा कृषिमा ल्याउन सकिएन भने बालुवा पानी हाले झैँ कृषिको बजेट अर्थपूर्ण हुनसक्दैन । प्रदेश सरकारले अहिले सम्म बनाएको कार्यक्रमहरुको तथ्यांकगत आधार भनेको संघिय सरकारले तयार पारेको डेटाहरुमा आधारित रहँदै आएको छ । ती डेटा आफैमा बिबादास्पद रहँदै आएको हाम्रो ठहर हुन गएको छ । संघिय सरकारको तथ्यांक अनुसार प्रदेश २ मा ६० प्रतिशत जमिन कृषियोग्य जमिन रहेको देखाएको छ तर हाम्रो अध्यनले यस प्रदेशमा झण्डै २७ प्रतिशत जती जमिन मात्र कृषियोग्य जमिन रहेको छ भनी हाम्रो ठम्याइ छ । यस्ता धेरै ‘कन्ट्राडिक्टरी’ आँकडाहरु छन् जसमा हामी संवेदनशिल छौँ । र हामीले कृषिमा अनुसन्धानको थालनी समेत गरी सकेका छौँ । प्रदेश सरकारले खाद्यान्न क्षेत्रका डेटा संकलन गरिसकेको छ । समग्रतामा हामीले अनुसन्धान कार्य तिब्र गतीमा अगाडी बढाउने प्रति संकल्पित छ ।
अहिले कोरोनाको माझ प्रदेश नं. २ सरकारले ०७७-०७८ को योजनामा के-कस्ता कृषिमूखी कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ ?
हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो की केन्द्रिकृत शासन ब्यवस्थामा रहँदै आएको हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रमा खासै ध्यान दिइएको थिएन । अतः यस क्षेत्रका समस्याहरु जडा गाडेर बसेको अवस्था छ । रातारात आमुल परिवर्तन ल्यान सम्भव पनि हुँदैन । तर हामीले उपल्ब्ध सीमित श्रोतसाधनको असीमित प्रयोग गरी यस क्षेत्रमा एक चरणको क्रान्ति ल्याउनेतिर उन्मुख छौ । प्रदेश नं. २ मा कृषकका लागि प्रमुख आवश्यकता भनेको उन्नत बिउ, समयमा मलको उपल्ब्धता र आधुनिक सिँचाईको व्यवस्था रहेको छ । हामी यी सबै क्षेत्रमा गम्भिर छौ । हामीले गत वर्ष पनि रासायनिक मल उत्पादनमा किसानलाई ७५ प्रतिशत सबसिडी दिने कुरा गर्याथ्यौ । तर यो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुन सकेन । कारण थियो कृषकलाई यसको बहुआयामिक फाइदा बारे यथेस्ट जानकारी नै भएन । यस वर्ष हामी हरेक जिल्लामा किसानलाई यसबारे जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु गरी बुझाउने योजना बनाएका छौँ । र यो कार्यान्वयण हुन्छ भन्ने कुरमा हामी विश्वस्त छौ । त्यसैगरि हामीले हजारौ डिप टिउवल देखि स्यालो टिउवल कृषकलाई उपल्ब्ध गराउँदै आएका छौ, आधुनिक सिँचाको लागि । र यसले निरन्तरता पाउने नै भयो । साथै यस प्रदेशमा रहेका ११७ वटा नदीहरुबारे अध्यन गर्दै छौ, कृषिको दृष्टिकोणले । अध्यन पश्चात त्यस्ता नदी जसमा वर्षभरी पानीको बहाव हुन्छ त्यस्ता नदीबाट वैज्ञानिक तरिकाबाट मझौला सिँचाई योजना तयार गरी व्यवहारमा ल्याउने हाम्रो योजना रहेको छ । ठूला सिँचाई योजनाहरु संघिय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको छ । र कृषि क्षेत्रमा संघिय सरकारको उदासिनता दुःखद छ ।
देशमा प्रत्येक वर्ष यहाँका कृषकहरुले मलको समस्या भोग्नु परेको छ । संघियता आइसके पश्चात पनि यस्तै रह्ने हो भने आमजनताले संघियताको अनुभूती गरेको मान्न सकिएला ?
मैले पहिला नै भने की प्रदेश सरकार रासायनिक मलमा जोड दिँदै आएको । यस बारे विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु समेत प्रदेश सरकारले तयार गरिसकेको छ । र यसमा कृषकलाई अधिकतम सबसिडी समेत दिने निधो छ हाम्रो । र यो समस्या राष्ट्रिय समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले यस विषयमा संघ सरकारसंग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ । मल खरिद प्रक्रिया ‘ग्लोबल टेण्डर’बाट गरिन्छ । यो एउटा जटिल प्रक्रिया हो । तर कम्तिमा आपूर्ती र वितरण सम्बन्धि क्षेत्राधिकार प्रदेश ले पाउनुपर्छ भने हामी ६ वटै प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रिहरुले सामुहिकरुपमा आवाज उठाइ रहेका छौ । तर प्रदेश सरकार प्रति सदैव असहयोगकारी भूमिका खेल्ने संघिय सरकारको नियती सबैलाई थाहा नै छ ।
केहीदिन पहिला मात्र प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रि शेख हसीना संग ५० हजार मेट्रिक टन यूरिया पौँचो मागेका छन् । यसलाई तपाइँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
छिमेकी मूलुकसंग सहयोग माग्नु राम्रो कुरा हो । तर तपाइँ नै भन्नुस, अहिले एकहप्ता मा किसानले मल पाएन भने पछि त्यसको के महत्व ?बिमारीलाई औषधीको खाँचो रहेको बेला मा औषधी दिने हो । मृत्युपश्चा औषधीको के औचित्य ? धानमा रोग लागेर नस्ट भइसके पश्चात पैँचोमा ल्याइने यूरियाको के महत्व ? सापट नै माग्नु थियो भने १५ दिन वा एक महिना पहिला मागेको भए सार्थक हुन्थ्यो की ! अर्को कुरा, यो राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरुले नेपालमा सदियौ देखि शासन गर्दै आएको छ । बंगलादेशको इतिहाष हामी भन्दा धेरै पछाडीको छ । उनिहरुले मल निर्यात गर्ने ल्याकत बनाई सकेको छ । अनि हाम्रा शासकले के गरेर बसे ? त्यहीँ भएर पनि संघियता नेपाली राजनीतिको प्रमुख आवश्यकता थियो ।
भन्नाले प्रदेश नं. २ सरकार किसानले भोग्न बाध्य मलको समस्यालाई गम्भिरताका साथ लिएको छ ?
निश्चितरुपमा हामी गम्भिर छौँ । हामीलाई थाहा छ यस प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड भनेकै कृषि हो । र यथाशिघ्र हामी यो समस्याको समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अघि मैले भने अनुसार ‘आगे्रनिक मल’ लाई हामीले प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाएका छौ । “आग्रेनिक स्टेट”को रुपमा यो प्रदेशलाई हामीले स्थापित गर्ने हो । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत यो उपुयूक्त रहेको बारे हामी किसानलाई शिक्षित गरी यसबारे ‘मोटिवेट’ पनि गर्नेछौँ ।
किसानले अब अधिक उत्पादन गर्न सक्छन भनी तपाइँले विस्वास दिलाउने आधारहरु केके छन् ?
हेर्नुस, उन्नत बिउ, मल र आधुनि सिँचाई को उपल्ब्धताबारे मैले अघि भनी नै हाले । अर्को महत्वपूणर् कुरा भनेको माटो सुहाँदो बाली हो । अर्थात कुन क्षेत्रको माटो कुन बालीको लागि उपयूत्त हो भनी अध्यनको आवश्यकता हुन्छ । माटो परिक्षण गरी खेतीपाती गर्नुपर्छ भने मान्यतालाई हामीले ग्राहिता दिने सोँच अनुरुपम अगाडी बढ्ने निधो गरेका छौँ । ‘सोयल टेस्टिङ्ग’ कार्यालय समेत हामीले खोली सकेको अवस्था छ । जसअनुरुप हरेक जिल्लाका स्थानिय निकायसंगको सहकार्यमा किसानहरुलाई पूर्वसूचना दिइ उहाँहरुको खेतमै गएर माटो परिक्षणका कार्य हामीले संचालन गर्ने छौ । यसो गरेमा मात्र कृषक को मिहनेत र लगानी अनुरुपको प्रतिफल देखिने छ ।
कृषिमा हुने लगानीको चर्चा गर्दा अनुदानको नाम मा रकम खर्च हुन्छ तर त्यसअनुरुपको प्रतिफल देखिदैन । अनुदान प्रक्रिया बारे गहनासाथ सोँच्नु भएछ अहिले सम्म ?
म पूर्ण सहमत छुँ की अनुदान प्रक्रियामा पुनरावलोकनको आवश्यकता छ । अनुदानको नाममा अर्बौको रकम खर्च हुँदै आएको छ, नेपालमा । तर यसले खासै प्रतिफल देखाउन सकेको छैन् । वास्तवमा भन्ने हो भने अनुदान ‘इनपुट र आउटकम’ मा दिँदा उचित हुन्छ । प्रदेश सरकार यसै अनुरुप अघि बढ्दैछ । यसबारे हामीले निर्देशिका समेत बनाइ सकेका छौँ र केबल उत्पादनमा अनुदान दिने भनी हामी संकल्पित समेत भएका छौँ । र यसै वर्ष देखि हामी निर्देशिका बमोजिम अनुदानका कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउने छौँ । जस्तै कृषकले गर्ने दूध उत्पादनमा प्रत्येक लिटरमा २ रुपिँया दिने हो । यसले कृषक को हौसला बढाउने छ र किसानहरुलाई प्रतिस्पर्धी समेत बनाउने हाम्रो ठम्याई छ ।
तपाइँले भर्खरै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नु भएको छ । कर्मचारी सरुवा हचुवाको भरमा भयो यसलाई रोक्न अपिल गर्नुभए छ । वास्तविकता के हो?
यो त हेर्नुस काठमाण्डौको संघियता बिरोधी मानसिकताको उपज हो । प्रदेशमा अस्थिरता कायम भयो भने प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित हुन्छ । आम मानिसमा संघियता प्रति बितृष्णा जगाउन सकिन्छ की भने कुण्ठित भावनाको नतिजा हो, संघिय सरकार को । पहिला पहिला राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनताले सास्ती भोग्नु परेको हुन्थ्यो । अहिले कर्मचारीतन्त्रलाई ठूला भनाउँदा दलका सरकारले अस्थिरता निम्त्याउने औजारका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । र यो नियोजित हो भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । सातवटै प्रदेशका हामी मन्त्रिहरु संवाद गर्दा हरेक प्रदेशमा कर्मचारी अस्थिरता संघीय सरकारले निमत्याइ रहेको छ । साढे दुई वर्षमै ६ वटा सचिब सरुवा गर्नुले के दर्शाउँछ ? न हामीसंग कुनै समन्वय छ न कुनै जानकारी नै । मिडीयाबाट हामी थाहा पाउँछौ की सचिबको सरुवा भयो भनेर । एउटा सचिबले कार्यकाल सम्हाली काम थाल्दा हठात सरुवा गरिदिने । अर्को आउँदा उनलाई केही महिना बुझ्न मै समय व्यतित हुन्छ । अति भएपश्चात हमीले पत्राचार गर्नु परेको छ ।
सरुवा त एउटा समस्या भयो नै । अर्को समस्या भनेको कर्मचारी आपूर्ती पनि हो । चाहिएको संख्यामा हामीसंग कर्मचारी छैन् । अहिले आठ वटा जिल्लामा रहेका ८ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रमा तीन वटामा मात्र ‘सेकेन्ड क्लास’ लाई प्रमुख बनाएन पठाउन सफल भएका छौ । बाँकी मा ‘थर्ड क्लास’ लाई निमित दिएर पठाउन बाध्य भएका छौ । त्यसैगरि जिल्ला भेटेरिनरी कार्यालयहरुमा समेत कर्मचारीको त्यसतै समस्या रहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले जनापेक्षा अनुसार कसरी सेवा दिन सक्छौ भन्नुस त ?हामीले प्रत्येक जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सेवा केन्द्रहरु विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ । त्यसको लागि हामीलाई कर्मचारीको थप आवश्यकता पर्छ । तर संघिय सरकारको नियती भनेको प्रदेशमा कर्मचारी अभाव सिर्जना गरेर अराजक्ता निम्त्याउने किसिमको छ । यसको अन्त्य गर्न हामी लागि परेका छौँ ।
अन्त्यमा प्रदेश २ का किसानहरुलाई कृषिमा उत्साहपूर्वक ढंगले लाग्नको लागि थप केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
यस प्रदेशका सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाई लाई यती मात्र भन्न चाहन्छु की कोरोनाले निम्त्याएको प्रतिकुल अवस्थामा प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय तपाइँहरुको साथमा छ । अन्नदाता किसानहरुलाई चाहिने हरेक सुबिधा हामी प्रदान गर्न तयार छौँ । श्रोत र अधिकारले भ्याएसम्म हामी आफ्नो भूमिकाबाट पछाडी हट्ने छैनौ । विदेश वा स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवा साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु की तपाइँहरु कृषि कर्ममा लाग्नुहोस । प्रदेश सरकारले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै युवामुखी कृषि योजनाहरु समेत तयार पारेको छ । हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौ की कृषिमा लागेर शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न प्रदेश २ सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।
Tags: कृषि मन्त्री शैलेन्द्र साहप्रदेश २युवामुखी कृषि योजनायुवाहरु कृषि कर्म
रणधीर चौधरी युवा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँलाई सामाजिक संजालमा पनि भेट्न सकिन्छ।